6 Matanho ekukwikwidzana neHofori uye Kuhwina Mutambo Wekutengesa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Mabhizinesi madiki uye epakati nepakati anogona kukwereta kubva kune chitoro hofori kukwikwidza uye kuhwina kurwisa vakwikwidzi vavo. Kune vanhu vazhinji, nzira yavo yekutanga ndeyekudzikisa mutengo wezvigadzirwa zvavo uye kuyedza kuenderana nevatengesi vakuru vepamhepo. Kukwikwidza kwemitengo uye kukwikwidza inzira inobatsira yekumira kune vatambi vakuru mumusika.
Kana iwe uine mukana wekutaurirana nezve mutengo wekutengesa wezvigadzirwa zvako nevatengi, unogona kushandisa nzira dzekugadzira mitengo kuita kuti brand yako inakidze kupfuura vavakidzani vako vesherufu. Kuvaka kuvimbika kwemhando inzira huru yekuisa chigadzirwa chako mumasherufu kana ukasataurirana chitoro mitengo uye usaderedze mutengo wako kupfuura vakwikwidzi vako. Iri rudzi rwechinangwa chakanyanya kurongedzerwa kune yako brand kushambadzira uye zvigadzirwa zvikwata, asi pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuita semaneja wekutengesa kukwezva kutarisa kwevatengi uye kumira kunze kubva kwavari.
Mune ino post, takataura nezve dzimwe nzira vatengesi vanogona kukwikwidzana nevatengesi vepamhepo. Isu takakurukura mabhenefiti aunogona kuunza patafura uye akasiyana ekutengesa, mitengo uye zvigadzirwa maitiro aunogona kuita kukwezva nekushandura vatengi. Nevanhu vakakodzera, nzira dzekushambadzira uye zvigadzirwa mune yako bhizimisi, iwe uchaona kuti zvese-mune e-commerce chitoro zvinogoneka.
Vatengesi vari kutora mukana wekunatsa mabhizinesi avo epamhepo uye kugadzira nzira dzekukwikwidza mumusika usina chokwadi uchipokana chitoro hofori dzakadai Amazon uye Walmart. Vemagirosa vanoziva kuti chero inivhesitimendi mune ruzivo rwevatengi kune yavo online bhizimisi zvichava pasina.
Kuitira kukwikwidzana Amazon, pane zvikonzero zvakanaka zvekuti vatengesi vatarise kune vatengi vavo uye zvavanoda. The chitoro hofori dzakaisa bara pakakwirira nekupa huwandu husingagumi hwechikamu chimwe nechimwe chechigadzirwa chavanenge vatengesa. MaSME anogona kukwereta peji kubva kune makuru vatengesi vepamhepo nekufungidzira izvo vatengi vanoda uye kuchengetedza zvimwe, zvisiri-kukwikwidza, zvine chekuita zvigadzirwa mustock.
Makuru e-commerce vatengesi vanokwanisa kupa zvakafanana kana zvakafanana zvigadzirwa kune vashoma pane vashoma vatengesi. Chimwe chezvishandiso zvakakosha zvinoshandiswa nevatengesi vakuru kuteedzera traffic uye kuwedzera ROI ndiko kushandiswa kwezvakanaka, zvakavimbika Marketing kushandisa michina Software kubva kune imwe sosi. Vatengesi, vakuru nevadiki, vanofanirwa kunzwisisa kuti kunyangwe nzira dzakawanda dzakasiyana dzavanoshandisa, kana vasina hurongwa hwakanaka hunoshanda, vanogadzira vanotungamira, vanyoreri uye vatengi vasingaite.
Chokwadi, ungasaenda kumba nemari iyoyo Amazon inoita, asi iwe unokwikwidza nenzira iyo vatengesi vakakura vakaita seTarget uye Amazon usadaro. Ivo vanopa vangangove vatengi kukosha kukuru munzvimbo dzavasiri.
Iyo inonyanya kushanda nzira yezvikamu zvakakura zvemusika ndeyekutarisa yako yese bhizimisi pane imwe niche chaiyo. A niche ndeye chero niche yaunoona semusika mudiki kwaunoda kuchengetedza zvigadzirwa nemasevhisi anokwezva kune akasiyana siyana evatengi kuburikidza neyakasiyana chigadzirwa kudzika mune dzimwe niche nzvimbo.
SaBajaj, makambani ari kubuda-musika ane zvinhu zvinovapa mukana wekukwikwidza mumisika yavo zhinji yekumba. Isu tinofungidzira kuti mazhinji emakambani akabudirira kwazvo acharamba achitarisa pamisika yavo yemuno nekuvandudza yavo yekutanga sosi yemakwikwi mukana. Mune angangoita ese maindasitiri, makambani anobudirira nekutengesa kumisika yavo yemuno.
Makambani mazhinji enyika anoshandisa nzira dzakaoma dzemitengo kuwana mukana wemakwikwi ane simba. Somuenzaniso, mudoro uye chitoro, makambani anokwikwidzana nevatengi zvichienderana nehukama hwavo hwakagadzwa. Muenzaniso wemaitiro emazuva ano emitengo ndiko kushandiswa kwemitengo ine simba nevatengesi vakuru vepamhepo, izvo zvinobvumira makambani kugadzirisa mitengo yechigadzirwa kuti ide.
Makambani akashandisa nzira iyi yemitengo makore mashanu kana gumi apfuura anogona kukuwana kwakaoma kukwikwidza nevakwikwidzi vakatora matekinoroji emazuva ano. Vatengesi vazhinji vari kuwedzera kunyorera sechinhu chinodiwa kuti ugare pamberi pevanokwikwidza.
Vatengesi vanofunga nezvevatengi maererano ne "marwadzo ekurwadziwa" uye maitiro avo bhizimisi inogona kubatsira vashandi uye nzanga nekuderedza mhirizhonga inokonzerwa nedambudziko ichawana chikamu chemusika. MaSME ane mikana yakawanda yekutora mukana wemaitiro akaita kuti vatengesi vepamhepo vabudirire kuitira kuti vasimukira uye vawedzere kukwikwidza munguva yazvino. bhizimisi zvakatipoteredza. Nekuronga, kuyera uye kuchinjika kune inoshanduka musika, unogona kugara pamberi pevakwikwidzi vako.
Iwo e-commerce hofori ari kushandura ruzivo rwekutenga uye zvinotarisirwa nevatengi, uye madiki uye epakati mabhizinesi mabhizinesi ari kutamba nemitemo mitsva. Vazhinji vatengesi muchikamu vari kuyedza kumisikidza e-commerce Mapuratifomu uye kunyorera masevhisi mumutambo wehasha wekubata, uku Amazon inoenderera mberi nekuvandudza uye kushandura chinangwa. Vanobudirira vatengesi vekutengesa havangotarise chete pakuwana makwikwi ekutengesa nevatengesi, asiwo vanobatsira kuunza zvigadzirwa zvavo kumasherufu nekukurumidza kupfuura vakwikwidzi vavo.
Walmart muenzaniso wakanaka wekambani yakavaka mukurumbira sechiratidzo nekupa rubatsiro nerutsigiro kunharaunda nekupa $35 miriyoni yekutsigira vatengesi, kuongorora mitemo yekuchengetedza yevashandi kuzvitoro, kuwedzera kuendesa pamhepo kubvumira maawa maviri kutakura uye parutivi rwemugwagwa. pikicha, uye nekuona kuti vatengi vanosvikirwa nguva dzese vachichengeta kureba. Chimwe chezvikonzero zvekubudirira kwayo ndechekuti Walmart inotaurirana nezvitoro zvayo kuti inzwisise chitoro zano uye inoshanda navo kugadzira kukwidziridzwa uye matekiniki ekuunza vatengi kunzvimbo yega yega. Semuyenzaniso, Kate Spade paakatadza kuzadzisa zvinangwa zvake zvepamwedzi zvekutengesa, vatariri vezvitoro vakabvunza mutungamiriri wekushambadzira weWalmart kuti abatsirwe.
Chakavanzika chevatengesi vepamhepo vanotungamira pasirese Amazon ndezvekuti vanoshandisa AI kukwezva vatengi uye kuwana mukana wekukwikwidza pane vamwe vatengesi. Imwe yemaitiro akajairika ndeye Frequent Purchaser chirongwa, iyo inoshandiswa nevakawanda vatengesi nevapeji vebasa.